यो निष्पक्ष छैन, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
यो निष्पक्ष छैन!
येशूले तरवार र भाला बोक्नुभएन। उसको पछाडि सेना थिएन। उसको एक मात्र हतियार उसको मुख थियो, र उसलाई के कष्टमा पर्यो त्यो उसको सन्देश थियो। उसले मानिसहरूलाई अत्यन्त रीस उठायो कि तिनीहरू उसलाई मार्न चाहन्छन्। उनको सन्देश गलत मात्र भएन, तर खतरनाक पनि थियो। यो विध्वंसकारी थियो। यसले यहूदी धर्मको सामाजिक व्यवस्थामा बाधा पुर्‍याउने धम्की दियो। तर धर्मगुरुहरू कुन सन्देशमा यत्तिको रिसाउन सक्छन् कि उनीहरूले आफ्नो बोक्नेलाई मारे?
मत्ती :9: १। मा धार्मिक अधिकारीहरूलाई दिक्क लाग्न सक्ने एउटा विचार पाउन सकिन्छ: "म पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ, धर्मीहरूलाई होइन"। पापीहरूका लागि येशूसँग एउटा खुशीको खबर थियो तर आफूलाई असल ठान्नेहरूमध्ये धेरैले येशू खराब समाचार प्रचार गरिरहनुभएको पाए। येशूले वेश्या र कर उठाउनेहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा आमन्त्रित गर्नुभयो, र राम्रा केटाहरूलाई यो मन परेन। "यो अनुचित हो," उनीहरूले भन्लान्। «हामीले त्यस्तो प्रयास गर्नु राम्रो हो, किन तिनीहरू साम्राज्यमा आउन सक्दछन् प्रयास नगरी? यदि पापीहरू बाहिर रहनु हुँदैन, यो अनुचित हो! »
निष्पक्ष भन्दा बढी
बरु, परमेश्वर निष्पक्ष भन्दा बढी हुनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रह हामीले कमाउन सक्ने कुनै पनि कुरा भन्दा पर जान्छ। परमेश्वर उदार हुनुहुन्छ, अनुग्रहले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, कृपाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, यद्यपि हामी यसको योग्य छैनौं। यस्तो सन्देशले धार्मिक अधिकारीहरू र जो कोही भन्छन कि तपाई जति धेरै प्रयास गर्नुहुन्छ, तपाईले बढि प्राप्त गर्नुहुन्छ; यदि तपाईले अझ राम्रो गर्नु भयो भने तपाईले राम्रो तलब पाउनुहुनेछ। धार्मिक अधिकारीहरूले यस किसिमको सन्देश मनपराउँदछन् किनकि यसले मानिसहरूलाई प्रयास गर्न, सही गर्नका लागि, न्यायसंगत जीवन यापन गर्न प्रेरित गर्दछ। तर येशू भन्नुहुन्छ: यो त्यस्तो छैन।
यदि तपाईंले वास्तवमै गहिरो खाडल खन्नुभयो भने, यदि तपाईं बारम्बार गडबडी गर्नुहुन्छ, यदि तपाईं सबैभन्दा खराब पापी हुनुहुन्थ्यो भने, तपाईंले मुक्ति पाउन तपाईंको खाडलबाट बाहिर काम गर्नुपर्दैन। भगवानले केवल येशूको खातिर तपाईंलाई क्षमा गर्नुभयो। तपाईंले यसलाई कमाउनु पर्दैन, भगवानले यो मात्र गर्नुहुन्छ। तपाईंले भर्खर यो विश्वास गर्नुपर्दछ। तपाईले गर्नु पर्ने सबै ईश्वरलाई विश्वास गर्नु हो, यसको लागि उहाँको वचन लिनु: तपाईको लाखौंको hasण माफ गरिएको छ।
केही व्यक्तिहरूले यस प्रकारको सन्देश स्पष्ट रूपमा नराम्रो पाउँछन्। "हुनसक्छ, खाडलबाट बाहिर निस्कन मैले कडा प्रयत्न गरें," तिनीहरूले भन्लान्, "र म प्रायः बाहिर छु। र अब तपाइँ मलाई भन्नुहोस् कि तिनीहरू सीधा खाडलमा तानिन्छन् कुनै पनि प्रयास नगरी? त्यो अनुचित हो! »
होईन, अनुग्रह "निष्पक्ष" होइन, यो अनुग्रह हो, यस्तो उपहार जुन हामीले पाउनु हुँदैन। परमेश्वर उदार हुन सक्नुहुन्छ जसलाई ऊ उदार हुन चाहन्छ, र शुभ समाचार यो हो कि उसले सबैलाई आफ्नो उदारता प्रदान गर्दछ। यो अर्थमा निष्पक्ष छ कि यो त्यहाँ सबैको लागि छ, यद्यपि यसको अर्थ यो हो कि उसले केही माथि ठूलो debtण राख्छ र अरूमा सानो --ण - सबैको लागि समान व्यवस्था, यद्यपि आवश्यकताहरू फरक छन्।
निष्पक्ष र अनुचितको बारेमा एक दृष्टान्त
दाखबारीमा काम गर्नेहरूको दृष्टान्त मत्ती २० मा छ। कसै-कसैले आफूले स्वीकार गरेको कुरा ठ्याक्कै प्राप्त गरे, जबकि अरूले बढी पाए। अब दिनभरि काम गरिरहेका पुरुषहरूले भने: "यो अनुचित हो। हामीले दिनभर काम गर्यौं र कम काम गर्नेलाई समान भुक्तानी गर्नु उचित हुँदैन » (cf. v। १२) तर दिनभरि काम गर्ने पुरुषहरूले काम गर्न सुरु गर्नु अघि उनीहरूले सहमति जनाएकै प्राप्त गरे (V. 4) तिनीहरू केवल गनगन गरे किनभने अरूले सही भन्दा बढी प्राप्त गरे।
दाखबारीको मालिकले के भने? I के मसँग मेरो इच्छाको साथ गर्न सक्ने शक्ति छैन? के तिमी डरलाग्दो देखिन्छौ किनकि म धेरै दयालु छु? » (V. 15) दाखबारीका मालिकले भने कि उनीहरु निष्पक्ष दैनिक प्रदर्शनका लागि निष्पक्ष दैनिक ज्याला दिनेछन्, र उनले गरे, तर अझै मजदुरहरूले गुनासो गरे। किन? किनकि उनीहरू आफैंलाई अरूसँग तुलना गर्थे र कम मनपर्दो थिए। तिनीहरूको आशा थियो र तिनीहरूमा निराश थिए।
तर दाखबारीको मालिकले ती मध्ये एउटालाई भन्यो: «म तिमीलाई गल्ती छैन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्न कि त्यो निष्पक्ष छैन, समस्या तपाइँको अपेक्षामा छ, तपाइँले वास्तवमा के प्राप्त गर्नुभयो भन्ने होईन। यदि मैले पछि आउनेहरूलाई यति धेरै भुक्तान नगरेको थिए भने, मैले तपाईंलाई दिएको कुराबाट तपाईं पूरै सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। समस्या तपाईंको अपेक्षाहरू हो, मैले गरेको के होईन। तपाईं मेरो लागि नराम्रो हुनुहुन्छ भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ किनकि म अरू कसैको लागि राम्रो छु » (cf. v। १-13-१-15)।
त्यसोभए तपाईं के गर्नुहुन्छ? यदि तपाइँको म्यानेजरले नयाँ साथीहरुलाई पुरानो, वफादार कर्मचारीहरु लाई बोनस दिएमा के सोच्नुहुन्छ? यो मनोबलको लागि धेरै राम्रो हुँदैन, हुन्छ? तर येशू यहाँ तलब बढ्ने कुरा गर्नुहुन्न - उहाँ यस दृष्टान्तमा परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ (V. 1) यस दृष्टान्तले येशूको काममा भएको केहि कुरा झल्काउँछ: विशेष गरी ठूलो प्रयास नगरेकाहरूलाई परमेश्वरले मुक्ति दिनुभयो र धार्मिक अधिकारीहरूले भने: «यो अन्याय हो। तपाईं तिनीहरू प्रति उदार हुनुहुन्न। हामीले प्रयास गर्यौं र तिनीहरूले सायद धेरै गरे। » अनि येशूले जवाफ दिनुभयो: "म पापीहरूका लागि सुसमाचार ल्याउँछु, धर्मीहरूलाई होइन।" उसको शिक्षाले राम्रो हुनुको सामान्य अभिप्रायलाई कमजोर पार्ने धम्की दियो।
त्यो हामीसँग के गर्नुपर्दछ?
हामी दिनदिनै काम र दिनको भार र गर्मी पाएपछि विश्वास गर्न चाहन्छौं, हामी राम्रो इनामका हकदार छौं। हामी गर्दैनौं। तपाईको चर्चमा कति समय भयो वा कति त्याग गर्नुभए पनि फरक पर्दैन। यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने तुलनासँग केही पनि छैन। पावलले हामी सबै भन्दा धेरै प्रयास गरे; उनले सुसमाचारको लागि हामीले भन्दा बढि त्यागहरू गरे, तर उनले ती सबैलाई ख्रीष्टको लागि हानिकारक ठाने। यो केहि पनि थिएन।
हामीले चर्चमा बिताएको समय ईश्वरको लागि होइन। हामीले गरेको काम उहाँ के गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। शीर्ष रूपमा पनि, अर्को दृष्टान्तले भनेजस्तै हामी बेकारका नोकरहरू हौं (Luk। १,, १०) येशूले हाम्रो सम्पूर्ण जीवन किन्नुभयो; उहाँसँग हरेक विचार र कर्मको लागि उचित दावी छ। हामीले उसलाई आज्ञा दिन सक्ने सबै कुरा पनि - यदि हामी उहाँलाई बाहिरबाट केहि दिन सक्ने कुनै तरिका छैन।
वास्तविकतामा हामी कामदारहरू जस्ता छौं जसले केवल एक घण्टा काम गरे र पूरा दिनको ज्याला पायो। हामीले मुश्किलले सुरू गर्यौं र भुक्तानी भयो जस्तो गरी हामीले वास्तवमै केहि उपयोगी भएको हो। के यो उचित छ? हुनसक्छ हामीले बिर्सनु हुँदैन। यदि फैसला हाम्रो पक्षमा छ भने हामीले दोस्रो मत खोज्नु हुँदैन!
के हामी आफूलाई लामो र कडा मेहनत गर्ने मानिसका रूपमा देख्छौं? के हामीलाई लाग्छ कि हामीले आर्जन गरेका भन्दा बढी कमायौं? वा हामी आफैंलाई अनुभवी उपहार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्दछौं, हामीले लामो समयसम्म काम गरे पनि? त्यो चिन्ताको लागि खाना हो।